Sida Loogu Ganacsado Shaqo Laaan Ikhtiyaar ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Heerka shaqo ama sida looga ganacsado shaqo laaanta
Ganacsatada xirfadleyda ah had iyo jeer waxay kormeeraan heerka shaqada, laakiin in kasta oo falcelinta daabacaadda ay dib udhacdo ama guud ahaan si liidata loogu muujiyo suuqyada wax lagu kala iibsado ama waxsoosaarka, suuqa sarifka lacagaha qalaad ayaa badanaa bixiya falcelin mala-awaal deg deg ah, oo aad ugu habboon sida loo sameeyo lacag fursadaha binary .
Khatarta khasaaraha ee macaamillada noocan oo kale ah waxay inta badan ku kordhaan amar baaxad leh, laakiin haddii aad si caqli ah u dhaqanto, waxaad ka kasban kartaa wax ka badan hal guul oo ah NFP (Lacag-bixinno Aan Beer-Beereyn) marka loo eego laba toddobaad oo taxaddar ganacsi dhexdhexaad ah ah. Marka aan bilowno.
Sidee tirakoobka shaqadu u saameynayaa dhaqaalaha iyo suuqyada maaliyadeed
Xeerku waa sahlan yahay: koritaanka shaqadu had iyo jeer wuxuu kiciyaa xoojinta lacagta waddanka, xoojinta macaamiisha iyo amaahda shirkadaha, koritaanka iibka ee ma aha oo kaliya alaabada macaamiisha, laakiin sidoo kale badeecadaha wax soo uruurinta.
Marka heerka shaqadu kordho, waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo dhab ah oo kaliya koritaanka lacagta qaranka, maal gasho kaydka qaranka ugu yaraan muddada dhexe .
Shaqada hoose waxay keenaysaa hoos u dhigid GDP (Waxsoosaarka Guud ee Gudaha), cadaadiska ku kordhay miisaaniyadda (dheefaha, hawlgabka, iyo kabida), hoos u dhaca qiimaha macaamiisha iyo iibka tafaariiqda. Tani waa calaamad cad oo muujinaysa dhibaatooyinka qaabdhismeed ee dhaqaalaha, hoos u dhac dhaqaale, ku tiirsanaanta soo dejinta, iyo xiisad ka taagan suuqa badeecadaha.
Xaaladaha soo noqnoqda: heerka shaqaalaynta ayaa hoos u dhacday, waxaan ka ganacsanaynaa hoos u dhaca lacagta waddanka, waxaan iibinnaa hantida saamiyada iyo alaabta ceyriinka ah ee ka jirta dalka .
Waa maxay heerka ugu wanaagsan ee shaqada? Dhammaan waxay kuxirantahay wadanka - dhaqaaleyahanku wuxuu tixgeliyaa shaqaalaynta caadiga ah ee 60-70% iyadoo heerka shaqo la'aanta ay kahooseyso 5%.
Tirakoobka aasaasiga ah ee shaqada
Waxay muujineysaa saamiga dadka shaqo la'aanta ah (rasmiga ah ee shaqo la'aanta ah): saamiga tirada dadka shaqo la'aanta ah iyo tirada guud ee shaqaalaha.
Kaliya kuwa xiiseynaya inay shaqo helaan ayaa xisaabta lagu daraa, marka laga reebo kuwa wax barta, ee aan u shaqeyn mabda 'ahaan, iwm
Heerka sare ee heerka shaqo la'aanta, ayaa sii xumaanaya rajooyinka laga qabo dhaqaalaha. Hoos u dhaca ku yimid tirada dadka shaqo la’aanta ah, dabcan, waxay saameyn togan ku leedahay calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaariga ah ee loogu talagalay dhammaan lacagaha lamaanaha ah. Tani waxay run ku tahay lacagaha dalalka oo dhan.
Marka la furayo heshiisyada calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah, waxaa lagama maarmaan ah in si cad loo fahmo waxa sababay hoos u dhaca sicirkan: qiime dhaca lacagta, kororka soo dejinta mala awaalka ah, masiibooyinka siyaasadeed ama kuwa dabiiciga ah .
Guud ahaan, ficilada ganacsadaha ee laxiriira macluumaadka shaqo la'aanta ee la tilmaamay waa in lalawaafajiyaa falceliska Tusmada Kalsoonida Macaamiisha .
Qiyaasta tirada shaqaalaynta maaha tirada guud ee dadka dalka, laakiin kaliya qayb ka mid ah oo loo arko inay firfircoon tahay dhaqaale - laga bilaabo 18 illaa 72 sano
Heerka shaqaalaynta ayaa ka soo horjeedda heerka shaqo la'aanta; Labada nin waxay muujinayaan xaaladda dhaqaale ee dalka. Tan macnaheedu waa marka shaqadu kordho, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah u leh kor u qaadista lacagta; haddii tirooyinku ay taban yihiin, markaa waxaad u baahan tahay inaad u isticmaasho xulashooyinka muddada-gaaban ee xeeldheer dhammaan hantida qaranka.
Waa suuqa shaqada Mareykanka ee saameynta ugu xoogan ku leh suuqyada saamiyada iyo sarifka lacagaha qalaad. Tirakoobyada shaqada ee FedReserve waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin tilmaame muhiim ah oo ku saabsan "caafimaadka" dhaqaalaha qaranka Mareykanka, isla waqtigaasna waxaa badanaa loo isticmaalaa isdabamarinta suuqa .
Tusaha Shaqada Qeybaha Gaarka ah ee ADP
Jaantuskani wuxuu muujinayaa isbeddelka tirada shaqaalaha bishii hore, iyadoon loo eegin qaybta beeraha iyo shaqaalaha dawladda.
Aaladda Xogta otomaatiga ah, Inc. (ADP) waa qeybta ugu sarreysa tirakoobka Mareykanka waxayna bixisaa adeegyo mushahar bixin ah; waxay wax ka qabataa shaqooyinka 500,000 ee ku dhowaad 450,000 hay'adaha ganacsiga (in ka badan 25 milyan oo qof) dhammaan qaybaha guud ee warshadaha.
Waxaa lagu daabacay Arbacada koowaad ka dib dhamaadka bisha 14.15 UTC, laba maalmood ka hor intaan la sii deyn xogta NFP, waxaa loo tixgeliyaa inay tahay tilmaame muhiim ah oo horseed u ah saadaasha NFP. Haddii qiimuhu ka sareeyo saadaasha, calaamadaha ganacsiga binary auto ee koritaanka dollarka; saadaasha ka hooseysa, doolarku hoos ayuu u dhacayaa.
Warbixinta NFP waxay si xoogan u saameyneysaa suuqyo badan (sarifka lacagaha qalaad, keydka, curaarta US Treasury, dulsaarka, iyo suuqa badeecada) taas oo ay ugu wacan tahay heerka dollarka ee ah lacagta keydka aduunka .
Warbixinta waxaa daabacay Waaxda Shaqada ee Mareykanka jimcaha ugu horeeya ee bil kasta 13: 30 UMC. Aynu ka faalloono xogta ugu muhiimsan:
Celcelis ahaan mushaarka saacaddii (m / m) .
Waxay muujineysaa isbeddelka heerka celceliska mushaharka saacadlaha ee warshadaha waaweyn, marka laga reebo beeraha. Waxay ka caawineysaa qiimeynta dhaqdhaqaaqa sicir bararka - kor u kaca mushaharka, ka hor wax soo saarka, waxay muujineysaa bilowga kororka sicir bararka.
Qiimaha ka sarreeya saadaashu waxay muujineysaa natiijo wax ku ool ah oo ku saabsan doolarka Mareykanka (kobaca), siciraduhu way ka hooseeyaan sidii la filayay - waxaan eegeynaa sida calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ahi ugu shaqeeyaan ikhtiyaarka PUT .
Dherarka celceliska usbuuca shaqada .
Celceliska tirada saacadaha ay ku qaataan shaqada shaqaalaha aan beeraha ahayn. Dhererka usbuuca shaqada waxaa lagu bixiyaa si aan toos ahayn, laakiin calaamado ganacsi oo muhiim ah oo muhiim ah: haddii ereyadan la yareeyo, ka dib dhibaatooyin ayaa ka soo bixi doona dhaqaalaha.
Tani waa cunsur muhiim ah oo go'aamisa waxsoosaarka warshadaha iyo dakhliga dadka ee bishaan socota.
Dhaqdhaqaaqa tilmaamuhu waa mid xilliyeed dabiici ah, xilliyada ciidaha, farsamo ahaan, xoog dabiici ah ama xoog siyaasadeed (tusaale ahaan, xiritaanka Mareykanka), xogtaan waxaa loo arkaa inay khaldan yihiin.
Sida had iyo jeer, qiimayaasha ka sarreeya wixii la filayay waxay siinayaan natiijo wax ku ool ah (kobcin) xagga doollarka; qiyam ka hooseeya saadaasha - fursadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaari ikhtiyaari ah Forex calaamadaha doolarka .
Beddelka tirooyinka shaqo la'aanta ee beeraha iyo waaxda gaarka loo leeyahay ee aan beeraha ahayn (gooni gooni ah) .
Wadarta guud ee dadka ka shaqeeya waaxda aan-beeraha ahayn waxay qiyaastii 80% ka yihiin shaqaalaha soo saara waxsoosaarka guud ee Mareykanka, iyagoo muujinaya inta shaqo ee laga abuuray ama lagu lumiyay dhaqaalaha Mareykanka bishii la soo dhaafay.
Kororka tirada shaqooyinka waxay muujineysaa kobaca dhaqaalaha, waxay horseedaysaa kororka dakhliga qoyska, sidaas darteedna kharashaadka isticmaalka, ee ka muuqda GDP; waxay siisaa taageero wanaagsan kobaca suuqa saamiyada guud ahaan.
Isbeddelada billaha ah iyo wax ka beddelka xogta waxay noqon karaan kuwo xoog badan oo aan had iyo jeer macquul ahayn. Xogta ka sareysa filashada ayaa muujineysa kor u kac mala-awaal ah oo ku yimid doolarka, laakiin badanaa had iyo jeer dib u gurasho. Had iyo jeer way sii socon kartaa ilaa uu ka xirmayo fadhiga Yurub. Xogta ka hooseysa saadaashu waxay damaanad qaadeysaa suuq muddo gaaban oo aad u xun oo doollarka Mareykanka ah .
Sidee looga ganacsadaa wax soo saarka xogta shaqaalaha ee USA? Haddii aad tahay qof bilow ah oo leh deebaajiga ugu yar, markaa jawaabtu waa mid aan shaki ku jirin - sinnaba, gaar ahaan ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee bilaashka ah. Kahor iyo inta lagu gudajiray daabacaadda NFP, mala-awaalayaashu waxay ugaarsadaan dhigaalkaaga isla marka kadib markii tirakoobka la daabaco. Baro heerarka aasaasiga ah ee shaqada, qiyaas isbeddellada muddada-dhexe.
Haddii aad leedahay waayo-aragnimo guuleysi ah oo ku saabsan ka ganacsiga warka, dallaalkaagu ma hor istaagayo habka mala-awaalkaaga muddada-gaaban ah, ka dibna ugu faa'iidada badan, isla waqtigaasna istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah u noqon doono furitaan deg deg ah Wicitaan ama ikhtiyaarka PUT isla markiiba ka dib daabacaadda oo ay ku egtahay 3-5 daqiiqo.
Taatikada ugu macquulsan waxay noqoneysaa in la galo laambadda labaad ee M5-M15 - dib u gurasho ama dhaqdhaqaaq guud oo kalsooni leh - ka dib marka xogta la daabaco oo la heli karo si loo falanqeeyo. Hantida: USD / JPY, EUR / USD, AUD / USD, USDX.
Oo halkan waa kalandar dhaqaale oo aad u fiican. Rabitaanka faa'iidada qof walba!